बुस्टर डोजः किन र कहिले लगाउने? फरक खोप लगाउन मिल्छ? - Subhay Postबुस्टर डोजः किन र कहिले लगाउने? फरक खोप लगाउन मिल्छ? - Subhay Post
सुभाय् संवाददाताJanuary 13, 2022 मा प्रकाशित (४ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १२९ मिनेट
कोभिसिल्ड/जोन्सन/अस्ट्राजेनिका खोप लगाएका व्यक्तिले फाइजर-मोडर्ना लगाउन मिल्ने उनले बताए। बाहिरी मुलुकमा पनि फरक खोप नै बुस्टर डोजको रुपमा प्रयोग गरिएको उनले बताए।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको ६ महिनापछि शरीरमा क्रमशः एन्टीबडी कम हुँदै जान्छ। जसले गर्दा शरीरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढ्दै जाने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले बताए। त्यही जोखिमलाई कम गर्न ‘बुस्टर डोज’ को आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्। (courtesy:swasthyakhabar)